जनताको चाहना समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली
समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपाली हुन त सर्वप्रथम कर्मचारीतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्छ ।
हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण भएको देश हो । यहाँका मठमन्दिर, तालतलैया, वनजंगल, हावापानी, विभिन्न जातजातिका चराचुरुङ्गी, हिमाल, पाटीपौवालगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्ष यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरू हुन् । विश्वमै नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यको धनी देशका रूपमा परिचित हुँदै आइरहेको छ । त्यसैले त बर्सेनि हजारौं पर्यटक नेपाल भित्रिने गर्छन् । किनकि त्यहाँ शान्ति छ, हिन्दू संस्कृति छ, धार्मिक सहिष्णुता छ, मेलमिलापको भावना छ, भाइचाराको सम्बन्ध छ, एकले अर्कोलाई पर्दा सहयोगी मन छ र नेपाल आफैंमा स्वाभिमानी छ । त्यसैले धेरै पर्यटक आउनु पनि मुख्य उद्देश्य हो । नेपाल समृद्ध छ, सुखी पनि छ ।
देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई फर्केर हेर्ने हो भने केही राजनीतिक दलले सरकारसँग विभिन्न माग राखी बन्द, हड्ताल, चक्काजामजस्ता गतिविधि देखाउँदै आइरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा विद्यार्थीहरूको पठनपाठन ठप्प भएको छ, दैनिक रोजगारी गरी गुजारा गर्नेहरूको रोजीरोटी खोसिएको छ, धेरै व्यवसायीको व्यवसायमा धक्का लागेको छ, सार्वजनिक यातायात चल्न नसक्दा हजारौं सर्वसाधारण बिचल्लीमा परेको अवस्था छ । रोगी, वृद्धवृद्धा तथा बिरामीहरूले अस्पताल जान सास्ती खेप्नुपरेको छ, देशको अर्थतन्त्रमा एक दिनको बन्दले भारी गिरावट आएको छ । अनि यस्तो वातावरण सिर्जनाले कसरी समृद्ध नेपाल हुन सक्छ ? कसरी सुखी नेपाली हुन सक्छौं ?
राजनीतिक दलका नेताहरू हरेक भाषणमा भन्ने गर्छन्, अब देश समृद्ध हुन्छ, सुखी नेपाली बनाउँछौं । तर, त्यो भाषणमा मात्रै सीमित हुन्छ । खोइ त बन्द–हड्तालको अन्त्य ? किन पटक–पटक संविधानसभा अवरुद्ध हुन्छ ? किन विपक्षी दलहरू रुष्ट हुन्छन् ? विपक्षी दलहरूको माग किन सम्बोधन हुन सक्दैन ? मलाई लाग्छ, यदि सरकारको काम–व्यवहारप्रति जनता खुसी र सुखी हुन्छन् भने पक्कै सरकारको विरोधी कहीँ–कतै पनि देखिँदैन । तर, यहाँ दैनिकजसो संसद् अवरोध, बन्द–हड्तालजस्ता जघन्य गतिविधि देखा पर्न थालिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा कहिले पनि समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपाली हुन सक्दैन ।
समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपाली हुन त सर्वप्रथम कर्मचारीतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्छ, प्रत्येक दिन हरेक सिस्टमको अपडेट हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ, अब्बल सुशासनको व्यवस्था हुनुपर्छ । विकासका पूर्वाधारहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा समावेश गरिनुपर्छ । देशको हरेक पूर्वाधारमा दक्ष जनशक्तिको प्रयोग गरिनुपर्छ । देशका हरेक प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरी देशभित्रै उत्पादनमूलक वस्तुहरू अत्यधिक उत्पादन गरिनुपर्छ । सार्वजनिक स्रोतहरूको सदुपयोग गरी जगेर्ना पनि गर्नुपर्छ । पर्यटकीय क्षेत्रको प्रबन्ध तथा विकास गरिनुपर्छ । राजनीतिक भागबन्डाले कहिले पनि देशको विकास हुँदैन भन्ने कुराको महसुस गरिनुपर्छ । यी सम्पूर्ण कुरा जरैदेखि ससम्मानका साथ पालना गरे पक्कै समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपाली हुन्छौं ।
त्यसैले आमनेपाली जनताको चाहना समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपाली भएको हेर्ने हो । भोको–नाङ्गो कोही बस्न नपरोस्, देशमा शान्ति आओस, सबैले रोजगारीको वातावरण प्रत्याभूति गर्न पाऊन् । राजनीतिक तन्त्रको अन्त्य होस, मूल्यवृद्धि तथा कालो बजारीकरणको अन्त्य होस । विकास–निर्माणका कार्यहरूमा छुट्ट्याइएको बजेटको सही तरिकाले सदुपयोग होस् अनि समयमै सम्पन्न होस् । समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपाली आफैँ हुन्छ ।
कोरोना भाइरसले अन्योल पारेको विद्यार्थीको भविष्य
नहोस् वैकल्पिक सिकाइमा लगानी बालुवामा पानी
कृषि कर्जामा नीतिगत विचलन